File Transfer wirelessly: Maxay tahay sababta aad u baahan tahay si ay u sameeyaan?
Marka aad tahay user images / mobile / macruufka iyo tababare, waxaad u baahan kartaa in lagu wareejiyo files, laakiin had iyo jeer macaamiisha email online ma laga heli karaa sabab u ah xiriir net ama xataa files waaweyn waxay u baahan yihiin waqti dheeraad ah si ay u wadaagaan. Adeega Bluetooth helo habka ugu fudud ee ay u gudbiyaan files in masaafo gaaban oo la xidhiidha internet xoog waxaad ka heli kartaa file wareejinta via Wi-Fi, waayo masaafo dheer. Sidaas darteed, kala iibsiga faylka wirelessly ayaa qayb ka mid ah hawlaha aan maalin walba la. Laakiin saxiixa wireless via Bluetooth, images / mobile / macruufka-Tababaraha 3G ama ka dib waxaa looga baahan yahay xaddidaadda hardware oo ka mid ah qalabka ka weyn ka.
Top 5 Apps in Samee images / mobile / macruufka-Tababaraha Transfer Bluetooth File Easy
Liiska sare 5 images / mobile / macruufka-Tababaraha barnaamijyadooda Bluetooth File Transfer la daadiyo magaca, size, download link / app dib u eegis lagu kaydiyo link, dhibcaha waa sida soo socota. Halkan, ka badan oo ku saabsan barnaamijyadooda kuwa hoos ku muujiyeen in ay miiska.
2. Bluetooth Xidhiidhiye 2 12.3 MB $2.99 3.0
5. Bluetooth & WiFi maangal Pro 32.2 MB $1.99 2.5
"Blue Me" waa mid ka mid ah barnaamijyadooda images / mobile / macruufka-Tababaraha kooxda hogaanka u wadaaga files wirelessly via technology Bluetooth. Waxaa la soo gaaray rikoorka weyn ee lagala soo bixi in ka badan 2 milyan oo jeer. HyTech Xirfadlayaasha ee soo bandhiga this app yar oo laakiin lagama maarmaanka ah lagala soo bixi karaa lacag la'aan ah halkan.
Kala iibsiga Multi-file waxaa kasoo muuqday via Bluetooth.
Connect qalabka macruufka badan sida iPod Touch ama images / mobile / macruufka iyo tababare si ay u wadaagaan videos qabtay in ka badan Bluetooth.
Fariin Text waa Intaa waxaa dheer u weyn in "Blue Me".
Photo qaybsiga iyo maamulka maktabadda qalabka la samayn karaa.
Waxay bixisaa taageero wicitaanada cod iyo wadaagga xiriir u dhexeeya qalabka macruufka.
"Rux" waxay ka caawisaa in ay si toos ah u xirmaan qalabka dhow socda macruufka iyo bandhigista "Blue Me".
Taageerada oo u ogolaanaya iCloud si ay u gudbiyaan xogta internetka / Wi-Fi.
Kuu ogolaanayaa diraya files ka macaamiisha email si toos ah Bluetooth.
User interface keenaysaa faham fudud.
Kala iibsiga Faylal ay ka heleen habka ugu fudud oo la xiriiro suuqa kala iibsiga iyo codka oo ku baaqay in goobaha.
"Rux" dhigaysa fudud in aad hesho qalabka dhow Bluetooth.
Mararka qaar waxoogaa yar Hadhi laakiin mararka qaarkood.
2.Bluetooth Xidhiidhiye 2
Daabacaadda "Ali Dar" "Bluetooth Xidhiidhiye 2" keeneen ugu muuqaalada hodan iyo app caanka ah ee images / mobile / macruufka iyo tababare si ay u wadaagaan files badan Bluetooth. "Bluetooth Xidhiidhiye 2" waa bedelka ee app guul "Bluetooth Xidhiidhiye". Waxay kuu ogolaanaysaa inaad si ay u wadaagaan xiriir, note, isiticmaalaa, codka, files warbaahinta, iyo dhacdooyinka via Bluetooth oo Wi-Fi u dhexeeya qalabka macruufka.
Kuu ogolaanayaa la wadaago waxyaabaha u dhexeeya qalabka ka images / mobile / macruufka-Tababaraha via Bluetooth oo Wi-Fi (in-app gadashada).
Dhamaan warbaahinta sida sawirka, music, video, xitaa ay diiwaan faylasha lagu wareejin karaa.
Xiriirada, qoraalo / qoraalka, sawir uu isiticmaalaa, waa loo oggol yahay si ay u gudbiyaan in ka badan Bluetooth.
Dhacdooyinka Calendar la synced karo, iyo hadlo Talkie adeeg badan Bluetooth waa la heli karaa.
Easy iyo saaxiibtinimo user interface.
Hal-guji app for Bluetooth oo Wi-Fi file sharing app.
Voice chat iyo guddiga sawir la wadaagi karaa Bluetooth.
Bluetooth Xidhiidhiye 2 ordi doonaa oo kaliya in qalabka macruufka.
images / mobile / macruufka-Tababaraha 2G aan la taageeray.
Bluetooth & WiFi App Box Pro waa app a bixisay images / mobile / macruufka iyo tababare si ay u gudbiyaan files wirelessly iyo "sara joogso! Shaybaadhka" ayaa lagu daabacay this. Waxay bixisaa dhammaan qaababka la wadaago la xidhiidhka iyo kulanka qaar ka mid ah muuqaalada u dhexeeya macruufka qalab badan Bluetooth oo Wi-Fi ah.
Suurto gashay wadaago iyo helaya file (sawirka, dukumenti, iyo warbaahinta) dhexeeya macruufka qalab badan Bluetooth oo Wi-Fi.
Qaybsiga Contact, qoraalka iyo cod call muuqaalada waaweyn yihiin in la isticmaalo.
Waxay bixisaa adeegyo sida camera CC si ay ula socdaan wax marka aad u baahan tahay sida socodka Baby.
Kuu ogolaanayaa ciyaaro ciyaarta classic: Cirib balse aay tahay Tac saaxiibo ama xubin qoyska ka badan Bluetooth.
User saaxiibtinimo interface.
Goobaha Easy in ay la tacaalaan oo dheeraad ah oo madadaalo.
badan oo muuqaalada inay ku raaxaystaan ​​oo ay isticmaalaan.
Kaliya isku xira u dhexeeya qalabka macruufka.
Ma u baahan tahay inaad kala soo baxdo version ugu danbeysay ee si fiican shaqada.
"Nathanpeterson.com" helay ugu wanaagsan ee la wadaago sawir app, Bluetooth Photo Share in images / mobile / macruufka-tababaraha. Waxa ay u ogolaataa wareejinta xiriirada iyo sawiro badan Bluetooth dhexeeya images / mobile / macruufka-tababarayaasha / iPod Touchs.
Photos Wareejinta ee isku qiyaas, ma u qaadidda ama riixo waxaa loo sameeyaa.
Xiriirada lala wadaagi karo Bluetooth.
Aqbaliddoodii Photo burin button iyo Falanqeynta thumbnails waxaa laga heli karaa.
Xulashada Multiple sawir iyo xayeysiis saareen feature in-app iibsiga.
Easy si ay u gudbiyaan sawiro dhexeeya images / mobile / macruufka-tababaraha iyo iPod Touch.
3G ama Wi-Fi la xidhiidha looma baahna.
Mararka qaarkood ah Artur xoogaa yar oo laga heli karo.
5.Bluetooth & WiFi maangal Pro
"Bluetooth & WiFi maangal Pro" waa mid ka mid ah barnaamijyadooda utility ugu wanaagsan ee wareejinta files badan Bluetooth oo Wi-Fi la xidhiidha. Waxa ay u ogolaataa dadka isticmaala images / mobile / macruufka iyo tababare si ay u wadaagaan files, waxay leeyihiin Isgaarsiinta iyo ciyaaro kulan classic dhexeeya macruufka qalab badan Bluetooth ama Wi-Fi.
Kuu ogolaanayaa diraya, helaya iyo kaydinta document files kala duwan.
Wadaagista waxyaabaha warbaahinta ka badan Bluetooth oo Wi-Fi.
Muuqaalada Isgaarsiinta sida calls cod / hadlo-talkie iyo chat waxaa laga heli karaa.
Socodka ilmahaaga, qolka, iwm oo kulan classic sida Cirib balse aay tahay Tac waa sifooyinka weyn Bluetooth.
User interface socon.
Easy in ay la tacaalaan iyo goobaha.
Dad badan oo ka mid ah qaababka inay ku raaxaystaan ​​oo ay isticmaalaan.
Ku xaddidan qalabka macruufka oo kaliya.
Latest version waxaa looga baahan yahay si fiican shaqada.
Top 5 images / mobile / macruufka-Tababaraha Wi-Fi Transfer Apps
Liiska sare 5 images / mobile / macruufka-Tababaraha barnaamijyadooda Transfer File Wi-Fi la daadiyo magaca, size, download link / app dib u eegis lagu kaydiyo link, dhibcaha waa sida soo socota. Halkan, ka badan oo ku saabsan barnaamijyadooda kuwa hoos ku muujiyeen in ay miiska.
6. WordPress 26.4 MB Free 4.5
8. Transfer Wireless App 18.2 MB $2.99 4.5
9. Transfer WiFi File Most 11.1 MB Free 4.5
10. Air Transfer + file sharing Easy 5.6 MB $1.99 4.5
WordPress waa app awood u madal oo dhan iyo sidoo kale in images / mobile / macruufka-Tababaraha kooxda bixisa wadaago nooca dhammaan faylasha meel mar walba la xidhiidha Wi-Fi. Waa qalab saaxiibtinimo weyn u qaabayn isku xusuus aad wax lagu kaydin jiray oo PC, images / mobile / macruufka iyo tababare ama iPad ama internetka.
Saamiyada oo dhan ka kooban warbaahinta waraaqaha ad ka badan la xidhiidha Wi-Fi u dhexeeya oo dhan PC, Kiniiniyada iyo casriga ah.
Access ka qalab kasta oo ay ka mid yihiin qalabka macruufka.
No lifaaqaya dheeraad ah oo ku bixiyaa xidhiidh ka ah ee files waaweyn.
2GB free online on calaamad kor lagu kaydiyo.
Ma waxaad files muhiim ah laga heli karaa meel kasta wakhti kasta.
Easy iyo user saaxiibtinimo interface.
Kaydinta Mass iyo files waaweyn la wadaagi karo oo la xidhiidha Wi-Fi.
Waxaa loo baahan xidhiidh ah oo internet xoog leh oo joogto ah.
2.Photo Bedelka App
Sharing of videos iyo sawir aad u hesho xawaaraha dheeraad ah oo la mid ah app "Photo Transfer App" ugu caansan oo loo isticmaalo kala iibsiga file. Ha aad la wadaagto files u dhexeeya qalabka iyo kumbiyuutarada macruufka la xidhiidha Wi-Fi.
Bedelka videos iyo sawiro si fudud uga soo qalabka macruufka in Mac, Linux ama Windows PC.
La wadaag kuwa video ama ku jira sawir ka mid ah qalabka iyo kumbiyuutarada.
Si fudud u dhaqaaqo HD videos ka images / mobile / macruufka-Tababaraha in iPod Touch
Samee gurmad u ah oo dhan video iyo sawirka ku jira.
Waa inaad mar qalab iyo madal PC app.
Plugins adeegyada internetka sida Flickr, DropBox ama Google Drive waxaa laga heli karaa in app iibsiga.
Photo iyo video wareejinta noqon karaa suurto gal ah in jiho kasta (Qalabka inay PC, qalabka si ay qalabka) la xidhiidha Wi-Fi.
Koombiyuutarka iyo qaybsiga waxaa ka hawl yar ma macruufka qalabka ka qalabka macruufka.
Sidoo kale waxay bixisaa file sawir Bluetooth wareejinta xarunta.
Plugins u Flickr, DropBox ama Google Drive, waxay u baahan yihiin qalab la iOS6 ama macruufka 7.
Xiriir Network u baahan yahay inuu xoog, iyo waxa aad ku kici doona in yar oo dheeraad ah.
Video wareejinta badan Bluetooth aan la heli karin.
Transfer 3.Wireless App
Transfer Wireless App waa mid aad u fududahay in la isticmaalo iyo user saaxiibtinimo interfaced app kala iibsiga file in wareejin karaan image iyo video files badan la xidhiidha Wi-Fi. Waxaad sawiro ka images / mobile / macruufka-tababaraha ayaa loo gudbin karaa si aad PC ama iPad / iPod Touch cable wax USB in masaafada u weyn oo aan.
No xadeynta loogu wareejiyo videos iyo sawiro ku size file ama lacagta.
No daba yaac iyo adeegyada ay u nuqul ka album sawir in qalab cusub.
Dhaqdhaqaaqa Easy sawirro in dhammaan qalabka ay ka mid yihiin qalabka macruufka non.
Mid ka mid ah mushaar waqtigii app ah, oo waxaa la password ilaaliyo.
Qaabab sawir cayriin waa la badbaadin karaa.
"Personal halakeeyeen" waxay bixisaa kale ah kuwi ku Bluetooth.
iOS7 waxaa laga doorbiday interface UI iyo user aad design interface socon.
Taageerada in aan qalabka macruufka iyo bixiyo mar labada dhufto.
Photos iyo videos si fudud loo wareejin karaa.
Bluetooth xiriir aan la heli karin.
Transfer WiFi File 4.Feem
"FeePerfect AG" s hadiyad in dadka isticmaala images / mobile / macruufka-Tababaraha yahay "Transfer File Feem WiFi" aad ka bixin karto kala iibsiga file maxalliga ah iyo kuwa lagu sheekeysto wirelessly aan ah internet ama USB xiriir cable.
Waxyaabaha Share warbaahinta iyo dukumentiyada in aad qalabka dhow ka badan Wi-Fi aan internet.
No u baahan USB ama Bluetooth.
Bedelka files si ay Android, Windows, Mac ama Linux ka images / mobile / macruufka-tababaraha.
Qoraallada / chat waa la heli karaa.
No biilka ah ee la xiriira internet.
Free Wi-Fi kala iibsiga file in safafka badan oo OS.
Aad u fududahay in la isticmaalo iyo user saaxiibtinimo interface.
No USB cable ama Bluetooth waxaa lagu taageeray.
5.Air Transfer + file sharing Easy
Ayaa awood badan file wareejinta app "Transfer Air + file sharing Easy" via Wi-Fi ugu fiican ee maaraynta content on kaydinta iyo iyaga wirelessly la wadaago. Waxaa la iman document siladda, browser internetka iyo saxaafada ciyaaryahan.
Waxay bixisaa file kala iibsiga ugu fudud badan Wi-Fi dhexeeya images / mobile / macruufka-tababaraha iyo PC.
Waxyaabaha Media, waraaqaha, Bookmarks, qoraalka wareejiyo on xidhiidhka ka wireless.
A ciyaaryahan music, siladda document iyo web browser la downloader file waxaa laga heli karaa.
Jiitaa A hal dhibic oo wareejin karaan wax files.
Waxaa qaban karto ee asalka ah.
Mararka qaarkood waxay muujinaysaa ah Artur xoogaa yar.
Sida loo isticmaalo Bluetooth sawirada / mobile / macruufka iyo tababare si ay u gudbiyaan Files
Tag ah "Menu" iyo dooran "Settings".
Laga soo bilaabo "Settings" menu, Tubada in la furo "Guud". Waxaad ka arki kartaa "Bluetooth" doorasho.
Hadda ka jaftaa on the "Bluetooth" menu iyo Dooro si ay u soo noqdaan "on".
Ka dib markii jeestay Bluetooth "ON", waxaad qalabka liiska inay ogaadaan iyaga ka heli kartaa.
Hadda ka jaftaa on Device in aad rabto in aad la wadaagto files iyo xubnuhu in ay xirmaan qalabka.
Download app ka dukaanka Lugood liiska la siiyay qodobkan iyo abuurtaan app ah si ay u gudbiyaan files.
Dooro file ah in ay wadaagaan oo u soo dir qalabka ku xiran la heli karo ka hor via Bluetooth.
5 Best Music App u mini iPhone / iPad / iPad
> Resource > iPhone > Top 10 barnaamijyadooda iPhone la Sameeyo File Transfer wirelessly